JINGHPAW KASA: လိုင်ဇာသို့ တိုက်လေယာဉ်ဖြင့် ပစ်ခတ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲ
လိုင်ဇာသို့ တိုက်လေယာဉ်ဖြင့် ပစ်ခတ် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲ
ဒီဇင်ဘာ (၃၀) ရက်နေ့ ညနေပိုင်း (၅း၁၅) နာရီခန့်တွင် ကေအိုင်အို ဗဟိုဌာန ဖြစ်သော လိုင်ဇာမြို့ ပေါ်သို့ ဗမာအစိုးရ စစ်တိုက်လေယာဉ်မှ ဝေဟင်မှ မြေပြင်ပစ် ဒုံးလက်နက်ဖြင့် နှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာစစ်တိုက်လေယာဉ်မှ ပစ်လွှတ်လိုက်သော ဒုံးလက်နက်များသည် လိုင်ဇာမြို့ပေါ်သို့ ကျရောက်ခြင်းမရှိပဲ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကျွန်းသစ်ခင်း အတွင်းသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
Burmese Government military air force shot tow times of missile to the Laiza, KIO head quarter at 5:15 PM on 30th December according to KIA officer report. But it was hit to Laiza, but exploded at the China teak farm.
ပ ထွေး တရုတ် က ဘာ မှ ပြော မှာ မဟုတ်ဘူး ထိုးကျွေး ထား ပြီးပြီ လေ
Kia/kio ဖက်မှာဘုရာသခင် ပါတယ်ဆိုတာ ယုံပြီမဟုတ်လား
Ha ha... that might me true..... but the point is .... take the photo of that evidences and show the whole world..... that will be an effective.political tool
Kia/kioကို ထောက်ခံတယ်။တိုက်တာ တိုက်
ယုံပြီ။ ဘုရား သ ခင် က မြန် မာ တပ်မ တော် ကို လ ဂျား ယန် တောင် ကြော ပေး လိုက် ပြီ လေ။kia ကို လိမ် မာ အောင် ဆုံးမ ဖို့ ဆို ဘဲ။
လိုင် ဇာ ဘဲ ကျန် တော့ တယ် ။မ ကြာ ခင် မြန် မာ တပ် မ တော် ကို ဘု ရား သ ခင် ကပေး တော့ မယ်။ ။အာ မင်။
အ ဖ ဘု ရား သခင် က လဂျား ယန် တောင် ကြော တ ခုလုံး ကို မြန် မာ တပ် မ တော် ကို ၃၀ ဒီဇင် ဘာ နေ့ လည် လောက် က " "2013"နှစ် သစ် လက် ဆောင် အဖြစ် ပေး လိုက် ပါ ပြီ။အား လုံး ဝ မ်း သာ ကြ လော့။။။
You!r right.Absolutely true.As your comment, GOD will giving that the LAJAYANG valleys asagift to burmese military for cemetery.GOD BLESS YOU
for cemetery of kia.in Lajayang.
Yes,lajayang valley given for burmese military is actually cemetery for burmese troopes.thanks alot God.
မင်းတို့စစ်တက္ကသိုလ်မှာ တိုက်ပွဲပုံစံဘေးမှာအမြောက်တွေပစ်စက်သေနတ်တွေပစ် ပြီး အလယ်ခေါင်ကဝပ်ပြီးသွားခိုင်းတယ်လေ။အခုစစ်မှာkia တွေကဝပ်ပြီးသွားမယ်အချိန်တောင်မရှိရှာဘူး။အဲလောက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာအထက်လူကြီးကိုကြောက်လို့တ်ုက်တယ်ထင်နေလား။ကိုယ့်ကချင်တစ်မျိုးလုံးမပျက်စီးရေးအတွက်တိုက်ဒါကွ။ သေသွားတဲ့ဗမာစစ်သားတွေဆိုသနားစရာတော်တော်ကောင်းတယ်။သူတို့ကတော့တိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့။သေသွားသည့်တိုင်သူတို့မသိဒါက သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စည်းပွားရေြးောင့်သူတို့သေတယ်ဆိုဒါဘဲ။ဟုတ်လားမဟုတါလားကတော့ company နာမည်တစ်ခုဆို ကြိုင် တဲ့ ဘယ်သူ့ဟာလဲတော့သိဘူး။